မီးခိုးမြူများ ထူထပ်စွာ ကျရောက်နေသောကြောင့် မြောက်ပိုင်းမြို့ကြီးများ၏ စက်ရုံများ ပိတ်ထာ? - Yangon Media Group
မီးခိုးမြူများ ထူထပ်စွာ ကျရောက်နေသောကြောင့် မြောက်ပိုင်းမြို့ကြီးများ၏ စက်ရုံများ ပိတ်ထာ?
ရှန်ဟိုင်း၊ မတ် ၂၇
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် မီးခိုးမြူများ ထူထပ်စွာကျရောက် နေသည်ကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် မြောက်ပိုင်းမြို့ကြီး ၂၈ မြို့ရှိ စက် ရုံများကိုပိတ်ပစ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီးဌာနက တိုက်တွန်းထား သည်ဟု ရှန်ဟိုင်းလုံခြုံရေးသတင်း များက မတ် ၂၇ ရက်တွင် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယခုသီတင်းပတ်၏ မီးခိုးမြူ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် တရုတ် မြောက်ပိုင်းမြို့ကြီးများက အရေး ယူဆောင်ရွက်ပြီး စက်ရုံများအား ကြီးကြပ်မှုခိုင်မာစေရန် တိုက်တွန်း ထားကြောင်း ဂေဟဗေဒနှင့် ပတ် ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနက မတ် ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားထားသည်။ သ တိပေးချက်တွင် ထိုဒေသရှိစက်ရုံ အချို့ကို ပိတ်ပစ်ရန်နှင့် အချို့စက် ရုံများ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရန် အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ ပါ ဝင်သည်ဟု ရှန်ဟိုင်းလုံခြုံရေးသ တင်းများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ခြောက်လကြာ ကုန်ထုတ်လုပ် မှုများ လျှော့ချခဲ့ပြီးနောက် စက်ရုံ အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်မြင့် တက်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေချိန်တွင် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း တရုတ် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း မြို့ကြီး ၃၄ မြို့ တွင် မီးခိုးမြူသတိပေးချက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မတ် ၂၈ ရက်အထိ ကြာမြင့် နိုင်သော ထူထပ်စွာကျရောက်နေ သည့် မီးခိုးမြူများသည် ဒေသတွင်း ရှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပြန်လည် လည်ပတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပူနွေးစို စွတ်သောလေများ ဖြစ်ပေါ် ပျံ့နှံ့ လာခြင်းကြောင့် မြူများဖြစ်ထွန်း လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြောက်ပိုင်းမြို့ကြီး ၂၈ မြို့ တွင် စက်ရုံများပိတ်ပစ်ရန်နှင့် ယာဉ် ကြောအသွားအလာများကို ကန့် သတ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ဆောင်းရာ သီစီမံကိန်းသည် ယခုလဆန်းတွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး တန်ရှန်မြို့ ၏ သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကို နိုဝင်ဘာလအထိ ထိန်းချုပ်ထား မည်ဖြစ်သည်။
Ref ; Reuters
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားများ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ ရုပ်သိမ်း
သမ္မတထရန့်က အမေရိကန် သံတမန်များ ထိခိုက်ခံစားရမှု ကျူးဘားနိုင်ငံတွင် တာဝန်ရှိဟု ယုံကြည်
တရားမဝင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများကို ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ လာရောက် လွှဲပြောင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ကောလာဟလ များကြောင့် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထား
၂၁ လတာအတွင်း အမျိုးသမီး အကြမ်းဖက်ခံရမှု တိုင်စာ ၇ဝဝ ခန့်ရှိ
စိုးရိမ်ရေမှတ်နား ရောက်လာသော ရခိုင့် အနာဂတ်အရေး